Hoy Jesosy: “Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy.” Jaona 6:37
Tamin’ny taona 1972 dia nisy gazety miafina natontan’ny Samizdat, tany amin’ny Firaisana Sovietika, nampiely vavaka iray. Io vavaka io dia hita tao amin’ny akanjomafanan’ny miaramila rosiana iray antsoina hoe Aleksander Zatzepta. Nosoratany nandritra ny ady lehibe faharoa izy io, fotoana kely talohan’ny fifandonana hamoizany ny ainy.
“Andriamanitra ô, henoy aho! Mbola tsy niteny taminao mihitsy aho teo amin’ny fiainako, nefa ankehitriny dia mahafapo fa mila mitsaoka Anao. Fantatrao fa hatry ny fahazazako mihitsy aho dia nilazan’ny olona mandrakariva fa tsy misy Ianao. Ary izaho, ny hadalako, dia nino azy ireny. Mbola tsy nitolagaga mihitsy noho ny halehiben’ny asanao aho. Fa izao hariva izao aho dia nanandratra ny masoko avy ato anaty hady, hijery ny lanitra rakotra kintana, eny ambonin’ny lohako! Ary nitolagagatamin’ny hatsarany mamirapiratra aho, ka nahatsapa tampoka teo ny halozan’ny fitaka …
Tsy fantatro, Andriamanitra ô, raha hanatsotra ny tananao amiko Ianao. Fa miteny izany aho, dia azonao. Tsy mahagaga ve, eo anivon’ny helo mahatsiravina aho dia miseho amiko ny mazava ary mahita Anao Aho? Faly aho satria nahafantatra Anao fotsiny.
Amin’ny misasakalina dia hanafika izahay, saingy tsy matahotra aho, satria miahy anay Ianao. Injay ny fanairana. Tsy maintsy miainga aho. Tena nahafinaritra ny niaraka taminao. Te hilaza aminao koa aho, ary fantatrao, fa ho mafy ady: mety ho anio alina ihany aho dia ho tonga handondὸna eo am-baravaranao… Fa inona àry ity? Mitomany ve aho izany? Ry Tompo Andriamanitro ô, hitanao izay nitranga; izao ankehitriny izao aho vao nanombok nahita mazava.”